Masinina momba ny fambolena | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Sokajy Masinina momba ny fambolena
MTZ 82 (Belarus): famaritana, fepetra, fahaiza-manao
Ao amin'ny saha dia mahazatra ny miatrika asa miaraka amin'ny fitaovana manokana. Ary mahomby izany raha toa ka tsy dia lehibe loatra ny teti-pambolena. Amin'ny toerana lehibe, mila mpanampy azo antoka ianao afaka manatanteraka karazana asa sarotra maro - traktera. Ny trakiera MTZ 82 dia safidy tsara. Modely iray amin'ny fiara fitaterana an-dalamby manerana izao tontolo izao, izay novokarin'ny Tractor Works Minsk nanomboka tamin'ny 1978.
Adaptateur ho an'ny motoblock: famaritana, fitaovana, fomba fanaovana izany
Ny asa rehetra ao amin'ilay tany dia mitaky fotoana sy ezaka be. Noho izany, ny mpamboly dia mampiasa fitaovana manokana toy ny mpamboly. Saingy tsy afaka manao ity vondrona ity ianao. Raha tsy manana adapter manokana ianao, dia tsy ho afaka hampihorohoro na hanova ny tany ny tany, ary hanala ny lanezy sy ny korontana. Ny sarety misy seza ho an'ny motoblock dia lafo vidy.
Fahafahana "Kirovtsa" amin'ny alàlan'ny fambolena, ny toetoetra ara-teknika amin'ny traktera K-9000
Ny trakiera Kirovets an'ny andian-tsarety K-9000 dia modely ho an'ny taranaka fahenina amin'ny taona fahenina novokarina tao amin'ny orinasa malaza Saint-Pétersbourg. Ny traktera K-9000 dia nahazo ny fisiany noho ny traikefa sy ny fampiharana ny fandrosoana farany ara-teknika eto amin'ity faritra ity. Ny milina dia manana teknika mahatalanjona ary koa karazam-panafahana, izay manome fahafahana azy tsy hoe tsy manome afa-tsy ny loharano, fa mba hanaparitaka ny ankamaroan'ny analogans amin'ny lafiny maro.
Tracteur "Kirovets" K-700: famaritana, fanovana, toetra
Ny trakiera K-700 dia ohatra iray tena tsara amin'ny fiompiana sovietika Sovietika. Ny tantsaha dia efa nahavita efa ho iray tapitrisa ary mbola mitaky ny fambolena. Anatin'ity lahatsoratra ity, hianatra momba ny fahaiza-manaon'ny trakiera Kirovets K-700 ianao, miaraka amin'ny famaritana amin'ny antsipirihany ny toetoetrany ara-teknika, miaraka amin'ny tombontsoa sy ny tsy fahampiana amin'ny milina sy ny maro hafa.
Ahoana ny fampiasana ny fitaovana "Tornado" ho an'ny fambolena
Ny mpamboly manamboatra "Tornado" - dia fitaovana fambolena ampiasaina amin'ny tanimboly. Manatsara ny kalitao sy ny haingam-pandeha amin'ny tany. Hatramin'izao, ity fitaovana ity dia tsy hita manerana izao tontolo izao. Taona roa lasa izay, tsy nisy mpihady sy lapoaly tao amin'ilay faritra, tsy nisy na inona na inona natao.
Ny karazana ovy lehibe indrindra ho an'ny motoblock, ny tombontsoa sy ny tsy fahampian'ny fampiasana ny zaridaina
Ny mpamokatra teknolojia momba ny fambolena dia manitatra tsy tapaka ny sakany, miezaka mampifaly ny mpanjifa be indrindra. Tsy ela akory izay, tany amin'ny toeram-piompiana kely kely, ny fanangonam-bolana dia natao tamin'ny tanana, saingy ankehitriny dia niova ny toe-draharaha. Ny fambolena lehibe dia mampiasa fitaovana fambolena lehibe mandritra ny fotoana lava, izay tsy mora ho an'ny kely kokoa.
Ny singa fototra amin'ny MTZ-80 traktera amin'ny fambolena
Amin'ny fambolena, matetika ny fitaovana manokana ampiasaina amin'ny fanitarana ny faritra lehibe. Ny iray amin'ireo mpanampy ireo dia ny MTZ-80 traktera, ireo toetra ara-teknika izay heverintsika ato amin'ity lahatsoratra ity. Famaritana momba ny kodiarana amin'ny kodiarana Ny kodiarana amin'ny kodiarana dia rafitra iraisana ho an'ny fitaovana an'ity kilasy ity: ny môtera dia mipetraka eo am-baravarankelin'ny gidro sy ny rafitra fanodinan'ny milina mampiasa konsola.
Ny fitaovana sy ny toetoetran'ny fiara MTZ-1221
Ny modelin'ny traktor MTZ 1221 (raha ny hafa dia "Belarus") no mamokatra "MTZ-Holding". Ity no modely faharoa malaza indrindra taorian'ny andian-tsarin'ny MTZ 80. Ny famolavolana mahomby, ny fahafaha-mamaky dia mamela ity fiara ity hitazona ny mpitarika ao amin'ny kilasiny any amin'ireo firenena avy any URSS taloha. Famaritana sy fanovàna ny traktera Ny modela MTZ 1221 dia heverina ho trakta mpamokatra faratampon'ny andiany faharoa an'ny kilasy faha-2.
Toeram-piantsonan'ny minisitra avy any motoblock: torolalana tsikelikely
Maro ny tantsaha manana landy madinika, mampiasa kofehy miova fo amin'ny anjara asan'ny traktera, satria tsy azo hamarinina amin'ny vidin'ny tra-boina ny milina iray feno tanteraka ao anatin'ny folo taona. Ny tena mahavariana dia ny fiovan'ny motoblock mankany amin'ny mini traktera, ny fomba fanaovana sy hampiasa fitaovana toy izany, dia hianatra avy amin'ity lahatsoratra ity ianao. Ny mety ho an'ny fitaovana ao amin'ny zaridaina sy ny zaridaina Ny mini-traktè mifototra amin'ny motoblock, arakaraka ny famolavolana sy ny filànao, dia azo ampiasaina amin'ny famindrana ny ranomandry, ny famafàna ny tany, ny fitaterana entana, ny fambolena ovy na ny vokatra hafa.
Ny fahaiza-manao sy ny toetoetran'ny fiompiana "Don-1500"
Miara-mipetraka "Don-1500" ny mpijinja - 30 taona izao no mendrika azy io, tsara kalitao, izay ampiasaina hiasa any an-tsaha hatramin'izao. Sarotra ny misafidy fomba fiasa amin'ny sehatra. Zava-dehibe ny mifidy modely miaraka amin'ny tombontsoa be indrindra ary tsy mandany vola. Momba ny toetra sy ny toetra ara-teknika amin'ny modely Don-1500 A, B, H ary P dia hiteny amin'ity lahatsoratra ity isika.
Karazana fiompiana lehibe sy ny toetrany
Ny orinasam-pambolena amin'ny toe-draharaha ankehitriny dia mihamitombo haingana. Ho an'ny fanangonam-bokatra haingana dia mora ampiasaina ny fitaovana ara-teknika isan-karazany sy ny milina ary ny milina. Ny famokarana voa sy ny fambolena dia tsy azo eritreretina ankehitriny raha tsy mampiasa ny grenady.
Ny fahaiza-manao ara-teknika amin'ny traktera MTZ-1523, ny tombontsoa sy ny tsy fahampian'ny modely
Tsy nokarakarain'ireo mpitaingin-tsoavaly ny fiheveran'ny olona toy ny hoe, ny fiaramanidina farany indrindra amin'ny fiara fitaterana na trakiera lehibe. Saingy raha tsy misy ireo dia tsy azo atao ny maka sary an-tsaina ny fambolena sy ny sehatra iombonana. Mihamaro foana ny milina toy izany, ary ny programa famokarana MTZ dia tsy misy ankoatra. Diniho ny iray amin'ireo trakta malaza indrindra amin'ity zavamaniry ity, dia ny MTZ-1253.
Mampifandray "Acros 530": famerenana, ny fahaiza-manaon'ny modely
Ny mpamboly maoderina amin'izao fotoana izao dia mifantoka amin'ny famokarana bebe kokoa sy ny fanitarana faritany marobe amin'ny faritany avo be. Ny "Akros 530" dia teknika matihanina izay mikendry ny hanatrika ireo fepetra avo lenta ireo amin'ny indostrian'ny indostria.
Tendrombohitra mpanodina: Ny foto-kevitry ny asa, ataovy izany
Efa an-jatony taona maro, ny fitaovana fambolena dia tsy nanova ny endriny. Toa tsy azo natao ny nanatsara azy ireo. Niova ny zava-drehetra rehefa nandroso tao amin'io faritra io ny fandrosoana ara-tsiansa sy teknika Amin'ny ankapobeny, ny ramanavy mahazatra dia lasa fitaovana mahazatra amin'ny sambo mpitondra entana madinika, izay antsoina koa hoe mpangalatra.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Masinina momba ny fambolena